Otu esi etinye NFC na mkpanaka na-enweghị ya | Androidsis
Ignacio Sala | 23/11/2021 12:00 | Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Mgbe ị na-azụta mkpanaka ọhụrụ, anyị ga-eburu n'uche, na mgbakwunye na mkpa ndị ị nwere ike ịnwe n'ihe gbasara arụmọrụ, nchekwa na igwefoto, na ngwaọrụ ahụ nwere NFC mgbawa, ịkwụ ụgwọ n'ụlọ ahịa na ụgbọ njem ọha na mgbakwunye na, ịnyefe data n'etiti ngwaọrụ n'ụzọ ezoro ezo.
Ọ bụ ihe dị mkpa achọrọ n'ihi na ọ siri nnọọ mgbagwoju anya tinye NFC na mkpanaka ọ bụrụ na nke a enweghị ya site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ bụ ezie na ọ bụ ezie na ụfọdụ ụlọ akụ na ụlọ ọrụ kredit wepụtara akwụkwọ mmado na mgbawa a afọ ole na ole gara aga, taa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ ole na ole ka na-ejigide ya.
1 Kedu ihe bụ NFC
2 Kedu ihe bụ teknụzụ NFC na kedu ka ọ si arụ ọrụ?
3 Ojiji nke teknụzụ NFC
4 Enwere m ike itinye NFC na mkpanaka m ma ọ bụrụ na ịnweghị ya
5 Otu esi amata ma ekwentị m nwere NFC
5.1 Ogwe ngosi
5.2 Site na nhọrọ nhazi
5.3 Site na ngwa
6 Otu esi akwụ ụgwọ na mkpanaka gị ma ọ bụrụ na ịnweghị NFC
Kedu ihe bụ NFC
NFC acronym sitere na nso-Field Communication, usoro nkwurịta okwu ikuku ezoro ezo dị mkpụmkpụ nke na-enye ohere. gbanwere data n'etiti ngwaọrụ abụọ.
A mụrụ NFC nkwurịta okwu protocol site na mmekorita nke Nokia, Philips na Sony na 2004, Protocol nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nrụpụta ama ama n'ụwa niile na-eji ugbu a, gụnyere Apple, n'agbanyeghị na ọ naghị akpọ ya.
Ma, ọ bụghị naanị na ọtụtụ smartphones na-eru ahịa, ma, na mgbakwunye, ojiji ya na-agbasawanye na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka. mgbaaka ọnụ ọgụgụ, smart smart na ọbụna mbadamba nkume dị ka iPad, ọ bụ ezie na ọ naghị enwe uche (dị ka iji ya na-ese foto ...).
The mbụ smartpohne see ahịa na NFC mgbawa bụ Nokia C7 na 2011Agbanyeghị, ọ dịlarị na ụfọdụ ekwentị mkpanaaka sitere na otu onye nrụpụta.
Kedu ihe bụ teknụzụ NFC na kedu ka ọ si arụ ọrụ?
Isi ojiji nke teknụzụ NFC metụtara na ịkwụ ụgwọ site na mobile ngwaọrụỌ bụ ezie na n'oge ọ bụ nwata, a na-eji ya eme ihe karịsịa iji kesaa ọdịnaya n'etiti ngwaọrụ, Sony bụ otu n'ime ụlọ ọrụ mbụ nwetara ọtụtụ uru na ya.
Site na ọrịa coronavirus na 2020, ejiri teknụzụ a mee ngwa ngwa nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọ na-ezere inye onye na-akwụ ụgwọ kaadị kredit ma ọ bụ debit ka o zụọ ihe wee si otú ahụ belata ohere nke ibute ọrịa.
Iji kwụọ ụgwọ na NFC nke ekwentị mkpanaaka, anyị ga-eme ka ọ rụọ ọrụ na ngwaọrụ anyị, ma ọ bụrụ smartphone, smart watch ma ọ bụ mbadamba. mee ka ọ bịaruo onye na-agụ ya nso.
N'oge ahụ, ngwaọrụ ga-arịọ ka anyị mata onwe anyị na ọnụ jiri akara mkpisiaka, ihu ma ọ bụ ụkpụrụ anyị iji chọpụta na anyị bụ ndị nwe ụlọ nke ọdụ ụgbọ elu nke anyị ji akwụ ụgwọ.
Dịka anyị nwere ike ịhụ site na ọrụ ya. a na nkà na ụzụ bụ kpamkpam mma. Anyị kwesịrị ka ọnụ ala dị nso na POS ịkwụ ụgwọ, na-enweghị ịbanye na kọntaktị, yabụ aha kọntaktị enweghị kaadị kredit na debit nke jikọtara mgbawa NFC na-enweta.
Ojiji nke teknụzụ NFC
Na mgbakwunye na iji ya kwụọ ụgwọ n'enweghị nsogbu, teknụzụ NFC na-ejikwa ọtụtụ ebe mee ka ụfọdụ ọrụ rụọ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka site na NFC mkpado.
Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike iji mkpado NFC nke mere na mgbe anyị rutere n'ụlọ, mgbe anyị na-agafe na mkpado ahụ, ka anyị gbanyụọ ụda nke smartphone anyị ma ọ bụ mee ka ọnọdụ adịghị emetụ n'ahụ, ka anyị gbanyụọ mobile data na-enwe a playlist play.
Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike jikọta ya na akpaaka ụlọ nke ụlọ anyị. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike itinye NFC mkpado n'akụkụ tebụl dị n'akụkụ maka mgbe anyị na-alakpu ụra, ọkụ niile na-agbanyụ ma ọ bụ mgbe anyị biliri, stovu ụlọ ịsa ahụ na ọkụ dị n'ime ụlọ ahụ na-agbanye ...
Anyị nwekwara ike hazie ya otú ahụ mgbe anyị banyere ụgbọ ala anyị, A na-arụ ọrụ bluetooth ka ọ jikọọ na ụgbọ ala anyị wee kpọọ ndepụta ọkpụkpọ, pọdkastị ...
Nke a na nkà na ụzụ na-ọtụtụ ebe na ahia ngosi na mgbakọ ka ngwa ngwa chọpụta ndị bịaranụ na-ezere mkpa ọ dị igosi njirimara onwe anyị.
Ọganihu kachasị ọhụrụ na teknụzụ a na-enye anyị ohere iji ekwentị anyị imeghe ugbo ala anyi, ọ bụ ezie na n'oge e bipụtara akụkọ a, Nọvemba 2021, ọ bụ naanị BMW mebere ohere a n'ụfọdụ ụgbọ ala ya.
Enwere m ike itinye NFC na mkpanaka m ma ọ bụrụ na ịnweghị ya
Dị ka m kwuru na mmalite nke isiokwu a, tinye NFC na ekwentị mkpanaaka na-adịghị etinye ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozi agaghị ekwe omume. Mgbe ụlọ akụ malitere ịkwalite iji teknụzụ a, na 2015, ọtụtụ ndị nyere ihe mmado na teknụzụ a iji jide ekwentị ma si otú ahụ nwee mgbawa NFC arụnyere maka ndị na-enweghị ya.
Otú ọ dị, ugbu a, Ụlọ akụ ole na ole na-aga n'ihu na-enye ụdị nkà na ụzụ a Na ndị ji ya, dị ka BBVA, kwụsịrị inye nkwado na njedebe nke 2019, ihe ezi uche dị na ya na-atụle na ọtụtụ smartphones na ahịa na-eji mgbawa NFC abịa.
Otu esi amata ma ekwentị m nwere NFC
Enwere ọtụtụ ụzọ iji lelee ma ekwentị anyị nwere NFC.
Site n'ife ogwe ngosi nke gam akporo ọnụ, anyị ga-achọ akara ngosi aha NFC.
Site na nhọrọ nhazi
Ọ bụrụ na ekwentị anyị egosighi akara ngosi ahụ na panel ngosi, anyị ga-enwerịrị ike ịnweta Ntọala nke ọdụ anyị na N'ime igbe ọchụchọ, pịnye NFC.
N'ịhụ ihe Play Store aghọwo n'afọ ndị na-adịbeghị anya, o kwesịghị iju anyị anya ịhụ ka anyị nwere ike ịhụ na ụlọ ahịa ngwa Google. ngwa na-eme ka anyị mara ma ngwaọrụ anyị nwere NFC.
N'ọnọdụ ụfọdụ, karịsịa na ndị China mobilesỤfọdụ ọnụ ọnụ na-etinye mgbawa NFC, mgbawa na-adịghị na mpụga Asia, n'agbanyeghị na ọ ga-ekwe omume ịgbalite ya na ụfọdụ mobiles.
Otu esi akwụ ụgwọ na mkpanaka gị ma ọ bụrụ na ịnweghị NFC
Ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka gị enweghị NFC, dabere n'ụdị nrụnye ebe ị na-azụrụ, ọ ga-abụ na onye na-ere ere na-enye gị ohere. kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ ihe site na Bizum.
N'ụzọ doro anya, usoro ịkwụ ụgwọ a ga-adị naanị na obere azụmaahịa. Echela ka ị banye Carrefour ma ọ bụ Mercadona ma rịọ ndị Bizum ka ha kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ ihe ị na-eme.
Ọ bụ ezie na a naghị eji ya eme ihe kwa ụbọchị, ma karịa maka ịzụrụ ihe na ịntanetị, Ọ bụrụ na ị na-azụrụ ihe na obere ụlọ ọrụ, ọ ga-ekwe omume na m nwere ike ịnye gị email nke akaụntụ ejikọtara na PayPal ma kwụọ ụgwọ n'ebe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Otu esi etinye NFC na mkpanaka na-enweghị ya
Ihe kpatara 5 kpatara Onye nwe mgbanaka ji bụrụ franchise fantasy kacha atọ ụtọ maka ndị egwuregwu